Akụrụngwa akpaaka akpaaka nke akpaka nke China, oghere akpaaka akpaaka, oghere akpaaka na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ
Nkọwa:Akpa akpa akpaaka,Ọnụ ụzọ mepee akpaaka,Onye na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri,Akụkụ Ọnụ Ụzọ Ámá Akụrụngwa Dị Elu,,
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ Ngwa > Akpa akpa akpaaka
Ngwaahịa nke Akpa akpa akpaaka , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Akpa akpa akpaaka , Ọnụ ụzọ mepee akpaaka suppliers / factory, wholesale high-quality products of Onye na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Onu Ogugu Uzo Ogbaagba Akuku N'uzo  Kpọtụrụ ugbu a
Okwuntughe Akuku Nwepu Ọrụ Na-arụ ọrụ dịka ndị a: Ụdị: DC-150 Akwukwo akwukwo: akwukwo abuo, akwukwo abuo (d) Ibu ibu nke akwukwo akwukwo: s≤1 * 160kg, d≤2 * 230kg Ibu ibu nke akwukwo akwukwo (mm): s: 700-1300, d: 600-1200 Ọsọ ọsọ (mm / s): 200-450...
China Akpa akpa akpaaka Ngwa
Ihe kaya anyị na-akpaghị aka gụnyere 1 mpempe ụgbọala, + 1 belt, 7 mita, 1 idle pulley, Microprocessor, 4 sets of carriage blue wheels, 2 sets of guides guides, 2pcs igwe ntanetị, 2 tinye belt clamp mounts, 1 ike ọkọnọ njikwa na eriri USB, onye na-ekpo ọkụ 2, Aluminom nke ogologo ya bụ 2.08 mita, mita 3, ma ọ bụ mita 4.
Anyị bụ ndị na-emepụta ọnụ ụzọ na-emeghe ọnụ ụzọ na-emepụta iji nye ndị mmadụ ohere. Mgbawa akpaaka na-arụ ọrụ iji nye ọrụ nrịgo ahụ bụ otu n'ime ihe ndị mere ọnụ ụzọ na-eme ka ọ dịkwuo mma. Anyị na-emepe ụzọ ntanetị ndị na-agba ọsọ ugbu a, ohere nchekwa na mara mma.
Ọnụ ụzọ eji akpaaka nwere ọtụtụ ọrụ bụ isi nke gụnyere: ọnọdụ akpaka na oghere mepere emepe zuru ezu na / ma ọ bụ ọnụ ụzọ mepere emepe, ma wepụga naanị maka ijikwa okporo ụzọ. Imeghe ọnụ ụzọ akpaka nwere ike ịdị mfe iji mee ka ọnụ ụzọ oghere dị obere ma ọ bụ karịa. Ọrụ nchebe dị mkpa dịka ihe mmetụta nchekwa dị na-egbochi imechi ọnụ ụzọ ma ọ bụrụ na mmadụ ma ọ bụ ihe dị na mpaghara nchọpụta. Ọ bụrụ na emechie ụzọ ụzọ mgbe emechi, ha na-emeghere ozugbo ma ọ bụ ma ọ bụrụ na emechie ụzọ ụzọ mgbe ọ na-emeghe, a ga-akwụsị ya ozugbo site na usoro nkwụnyeghachi akụrụngwa nchekwa.
Nnukwu ọnụ ụzọ anyị na-ewu ewu. Chee echiche banyere nke a dị ka ịga n'ụlọ maka mkpa maka akpaaka ọ bụla kwa ụbọchị. A na-enyocha mpaghara niile na-emepụta ihe maka ngwa ngwa, ngwa ngwa enweghị nsogbu.
Ngwa: Ahịa, nlekọta ahụike, ọdụ ụgbọelu, ile ọbịa, ụlọ dị ọcha. Shenzhen Hongfa Automatic Door Co., Ltd edepụtara ọnụ ụzọ, a nwalere ma nwaa aka iji gboo gburugburu ebe obibi gị. oghere ndị na-emepụta ihe maka ịmepụta ụlọ ọrụ, azụmahịa, nlekọta ahụike, na ịzụ ahịa ahịa. Ị ga-ahụ ọnụ ụzọ anyị na-akpaghị aka na gburugburu ebe dịgasị iche iche, gụnyere: Ụlọ ọgwụ, Ọdụm, Ụlọ ahịa mkpọsa, Ụlọ ọgwụ, Ụlọ ahịa, Ụlọ ahịa na-ere nri, Ụlọ ahịa na-echekwa ngwá ahịa, Ụlọ ahịa Sporting, na ndị ọzọ.
Oghere ndị na-agba nkwụnye aka nwere ike ịbụ otu ọnụ ụzọ na-esote n'otu ụzọ ma ọ bụ ọnụ ụzọ na-abanye ebe ọhụụ akwụkwọ ọ bụla na-esere na ntụgharị ihu. A na-ejikarị ha eme ihe na ụlọ ahịa, nbata nke ụlọ ahịa, ụlọ ọgwụ na ngwa ndị ọzọ ebe ịchọrọ inye ndị ahịa aka aka ha, nchekwa ma dị mfe n'ụlọ gị. Tụkwasị na nke ahụ, otu n'ime uru kasịnụ nke ọnụ ụzọ na-emeghe bụ nchekwa ikike . Ebe ọ bụ na ọnụ ụzọ ndị a na-emeghe mgbe mmadụ na-abata ma ọ bụ pụọ n'ụlọ gị, ọ na-egbochi ike nke ike mgbe enwere ike ịmeghe ọnụ ụzọ maka ogologo oge.
Ngwa nchịkwa nke oghere akpịrị na-acha nsị nwere ọrụ bụ isi na ọrụ mgbatị, arụ ọrụ akpaka / jide / meghe / ọkara oghe iji gboo mkpa ndị ahịa. Onye na-ahụ maka eletriki eletriki nwere ike ịnweta ọtụtụ ọnụọgụ maka usoro nchịkwa nchịkwa zuru ezu maka ịchebe ndụ gị na ihe onwunwe gị karịa nchekwa. Ndị dịka: foto nchekwa nke nchekwa, eriri eletriki, ihe mgbakwunye na ihe ndị ọzọ. Egwuregwu ụgbọala ya na-ejikọta nkà na ụzụ Europe iji jikọta moto na igbe igbe, nke na-enye ike ụgbọ ala siri ike na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na mmepụta ikike dị ukwuu, ọ nwere ike imegharị ọnụ ụzọ buru ibu.
Inye ike, ịma mma, na teknụzụ niile na otu ngwugwu, ọnụ ụzọ Hongfa nke ọnụ ụzọ nkwụnye akpaka na-enye ụzọ ngwọta maka ihe ọ bụla ngwa. Ihe kachasị mma bụ ụda egwu nke Hongfa na-ebelata ụzụ arụmọrụ ka ọ bụrụ naanị ụda ma kwụsị nkwụsị vibration nke nwere ike ịgafe na ụlọ.
Akpa akpa akpaaka Ọnụ ụzọ mepee akpaaka Onye na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri Akụkụ Ọnụ Ụzọ Ámá Akụrụngwa Dị Elu Akpaaka akpaaka